Full Solutions ka The iPhone akụghịna / Reboot mere site iPhone Crash Text Ozi
Apple si iPhone ọrụ na-eche ihu ọhụrụ okuku ahụhụ ugbu a. A mfe ozi ederede, malite na okwu ahụ bụ "irè", nwere ike ime ka gị iPhone na okuku. Ugbu a, nza nke iPhone ọrụ nwere okosobode nke a. Ụfọdụ n'ime ha gbapụrụ, si okuku, na ụfọdụ n'ime ha ka na-scratching isi ha. Na-esi gị iPhone azụ nkịtị, ebe a bụ zuru ngwọta n'ihi na ị na-agbalị. Echefukwala na-eso ha ndị nọ ná mkpa na gburugburu gị.
Nke mbụ niile, ka ego otú manụ ozi anya dị ka n'elu uwa:
Olileanya na ị ga mgbe enweta ya.
Akpachara anya maka ihe niile iPhone ọrụ
Iji gbochie onwe gị site na-ada aja na ahụhụ ahụ, ị ​​nwere ike na-aga n'ime gị usoro ntọala ma gbanyụọ ozi ederede ọnụọgụgụ (Ịma Ọkwa> Ozi> Gosi Ntụle). Ga na-unu site na-enwe otu ntabi okuku n'elu anata ozi ejikari, ma ụfọdụ ọrụ kọrọ na na iji WhatsApp, akara ma ọ bụ ọbụna zipuru maka ozi nwekwara ike ịkpalite ahụhụ. Ị ga-elezi anya ego ozi site ugbu a.
Ngwọta 1: Reboot gị iPhone
Ị nwere ike ịhọrọ reboot gị iPhone, ma ọ bụrụ na Ozi ngwa ma ọ bụ ndị ọzọ ozi ngwa anaghị arụ ọrụ. Nke a bụ ụzọ kacha mfe na-esi gị iPhone nke okuku. Amaghị otú? Gbanwee na ngwọta 5.
Ngwọta 2: Jụọ ziri ozi iji zitere gị ozi ọzọ
Ozugbo ị natara a iPhone okuku ozi, nwere onye zitere gị iji zitere gị ọzọ ozi. Nke a ga-n'ụzọ dị irè na-enyere iji kagbuo si mbụ Strand.
Ngwọta 3: Ziga ozi na onwe gị
Ọ bụrụ na ndị Ozi adịghị arụ ọrụ na gị iPhone, i nwere ike ịjụ Siri iji zitere gị a ozi. Nke a ga-arụ ọrụ. Ma ọ bụ i nwere ike na-agbalị iji ihe iPad ma ọ bụ gị Mac izipu ozi gị iPhone site iMessage.
Ngwọta 4. Send a foto na kọntaktị site na Photos ngwa
A ngwọta na-akọrọ site a onye ọrụ, sị "na-ezipụ a foto na kọntaktị site na Photos ngwa nwere ike ka ha nweta ozi akụkọ ihe mere eme na ihichapụ mkparịta ụka." N'ụzọ ọ bụla, i nwere ike a na-agbalị bụrụ na ọ dịghị irè ụzọ.
Ngwọta 5. Zuru ihichapu okuku ozi
Ọ bụla iPhone bụ na a dị iche iche ọnọdụ. Ya mere ihe ngwọta nwere ike ịdị iche dị ka kpọmkwem chọrọ. Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara ihichapụ ozi ma ọ bụ ozi nhichapụ adịghị arụ ọrụ, i kwesịrị ihichapu cache nke ozi si gị iPhone. Ọ bụghị otú ahụ mfe ime ya aka site onwe gị, ma na a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ - Wondershare SafeEraser, ọ bụghị ihe a hassle.
Gịnị ka Wondershare SafeEraser ime iji idozi nke a iPhone okuku nke?
1. Ọ na-ahapụ gị ihichapụ ozi a si gị iPhone ma ọ bụrụ na i nwere ike ime ya site na iji "ihichapu Private Data" na-ahọrọ "Ozi".
2. Ọ na-enyere gị ihichapu ehichapụ data na ị na-emeghị ya kpam kpam. Ị na-eche na ị na-ehichapụ ugboelu ozi site na gị iPhone, ma unu egeghị n'ezie. Gị ihe nke "Hichapụ" na-eme ka ozi apụghị ịhụ anya. Ọ ka dị ebe. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike tufuo ya kpamkpam site na iji "ihichapu ehichapụ faịlụ" na-ahọrọ "Ozi".
Ị nwere ike nweta ikpe version nke usoro ihe omume ka a na-agbalị bụrụ na i nwere ndị dị otú ahụ a mkpa.
Mmechi: Ụfọdụ ọrụ kwuru na nke a okuku ozi mere ha iPhone n'ime Iweghachite ọnọdụ. Na nke a, ị nwere ike mfe nweta ha si Iweghachite ọnọdụ site na iji iTunes ma ọ bụ aka ntọala. Ị nwere ike gụọ zuru ezu ngwọta nke na-iPhone si Iweghachite ọnọdụ ebe a.
Ọ bụrụ na ihe ngwọta n'elu ọrụ n'ihi na ị, echefula ịkọrọ ha ka ndị enyi gị na-mkpa ha. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ndị ọzọ oké ma dị irè ngwọta, ị nwekwara ike ịkọrọ ha ka ayi na ihe n'okpuru.
Top 5 Alternatives ka Photoshop N'ihi iPhone
Olee otú Zuru usoro iPhone
> Resource> iPhone> Full Solutions ka The iPhone akụghịna / Reboot mere site iPhone Crash Text Mes